Somaliland: Hooyo U Dhaxday Askari Ciidanka Qaranka Ah Oo Sicir Bararka Dartii Ku Hanjabtay Inay Ubadkeeda Gaynayso Madaxtooyada - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Hooyo U Dhaxday Askari Ciidanka Qaranka Ah Oo Sicir Bararka Dartii...
Hooyo Dareen Dhiillo Leh Ku Cabbiraysa Saygeeda Askariga Ah, Ubadkii Ay Dhashay Oo Lagu Soo Eryey Dollar Laga Rabo Iyo Sicir Bararku Saamaynta Uu Ku Yeeshay Qoyskeeda
Xaliimo Maxamed Kaahin oo ah Mid ka mid ah haween-weynaha ururka Khudradleyda Iidaan ee Magaalada Hargeysa oo ka hadlaysay mar ay shalay bannaan bax isugu soo baxeen ururkeedaasi oo ay kaga cabanayaan sicir bararka iyo nolol xumada aafaysay shacabka Somaliland muddooyinkii dambe ayaa waxa ay ka sheekaysay dareen dhiillo leh oo ay ku cabbirtay xaqiiqada nolosha rasmiga ah ee ay ku nooshahay iyada iyo ubadkeedu iyada oo sheegtay in ay nolol maalmeedka suuqa uga raadiso ubadkeeda oo dhan lix caruur ah, odaygeeduna uu yahay askari furinta ka shaqeeya balse sicir bararku wakhtigan halis galiyey nolosha qoyskeeda.
Xaliimo Maxamed Kaahin Oo ka mid ahayd dadkii danyarta ahaa ee ganacsatada khudradda iidaan ee shalay isu soo baxay saxaafaddana la hadlay ayaa sheegtay in aanay isu qabanayn mushaharka uu qaato odaygeeda askariga ahi oo dhan Lix Boqol oo kun oo shilin, iyo sicir bararka saameeyey nolosheeda iyo waliba in loo soo eryey ubadkii dugsiga u dhiganayay oo laga doonayo lacag doollar ah iyana ay ku jirto guri kiro ah.
Haweenaydan oo is barbar dhig ku samaynaysa qiimaha lacagaha Jabuuti iyo Itoobiya iyo sida shacabka reer Somaliland lacagtoodii u daadiyeen iyo nolol xumada haysata qoyskeeda iyo sida saygeedu ilaalada ugu yahay wasiirrada caloosha waaweyn sida ay hadalka u dhigtay, iyada oo arrimahaasi oo dhan ka sheekaynaysaa waxa ay tidhi:
“Jabuuti 1977-kii markii ay qaadatay calankeeda 18,750 Faran buu marayay Boqolka Doollar Aynigaa aan ahayna wali intii buu marayaa. Itoobiyana waa la mid oo lacagteeda waa halkeedii oo ma siisato doollar. Innagu (Somaliland) lacagteenii gudaafadda ayaynu ku darnay, waynu daadinay oo muwaadiniin ma nihin. Anigu waxaan ahay haweenay Askari qabo. Lix ubad ah ayaa dugsiyada ii dhigta. Odaygaygu waxa uu qataa 600 oo kun oo shilin Somaliland ah. Intaasaan qaataa waxaanan galaa guri kiro ah oo xukuumadu guri iimay dhisin. Meel imay galinin. Ninkaygiina furinta ayuu joogaa oo xabbad buu laabta u dhigay. Raggan caloolaha waaweyn ee guryaha waaweyn ku jira ayuu ninkaygii Ilaalinayaa. Lixdii ubad ahaa baa la igu soo eryey markii la yidhi Mushaharkii waxbarashadu waa wada dollar. Xaggeen geeyaa?, ballan waxaan ku qaaday in aan kuwaa ubad ah madaxweynaha hortiisa geeyaa. Waa in aan toddobadaasi ubad ahba gurigiisa geeyaa. Taasaa ii ballan ah” ayay hadalkeeda ku soo xidhay hooyadan cabanaysay ee lagu magacaabo Xaliimo Maxamed.